कालिन्चोक भगवतीले सबैको रक्षा गरुन: हेर्नुस आजको राशिफल असोज १२ गते, शुक्रबार
September 28, 2018 Spnews Comments Off on कालिन्चोक भगवतीले सबैको रक्षा गरुन: हेर्नुस आजको राशिफल असोज १२ गते, शुक्रबार
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) : प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो भएर जाने तथा दाम्पत्य जीवन सुखी रहनेछ । पढाई लेखाइमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई हराउँदै अगाडि बढ्न सकिनेछ । विभिन्न अवसरले पछ्याउँनेछन् भने चाहेको समयमा कामहरू सम्पन्न हुने हुँदा आफन्तहरू खुसी हुनेछन् […]
दोलखा भीमसेनले सबैको मनोकामना पुरा गरुन: हेर्नुस आजको राशिफल भदौ २२ गते, शुक्रबार
September 7, 2018 Spnews Comments Off on दोलखा भीमसेनले सबैको मनोकामना पुरा गरुन: हेर्नुस आजको राशिफल भदौ २२ गते, शुक्रबार
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) : पुराना कामहरू छोड्नाले आउने रकम आने छैनन् । व्यापार व्यवसायमा लगापन गरे पनि आम्दानी कमनै हुनेछ । आफन्त तथा आमा सँग मनमुटाब बढ्ने योग रहेको छ भने टाढिएर लामो दुरीको यात्रा गर्नु पदा मन […]
पाथिभरा देवीले सबैको रक्ष गरुन: हेर्नुस आजको राशिफल भदौ १५ गते, शुक्रबार
August 31, 2018 Spnews Comments Off on पाथिभरा देवीले सबैको रक्ष गरुन: हेर्नुस आजको राशिफल भदौ १५ गते, शुक्रबार
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) : राम्रा तथा विलासीताका बन्तुहरुको प्रयोग मार्फत अरूको मन आफूतिर लोभ्याउन सकिनेछ । पढाई लेखाइमा मन जाने हुनाले अरू भन्दा राम्रो नतिजा ल्याउन सकिनेछ । रोकिएका काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ। शत्रुहरू किनारा लाग्नेछन्। संघर्ष गरेरै […]
तपाइको आजको दिन कस्तो हुनेछ ? हेर्नुस राशिफल भदौ ८ गते, शुक्रबार
August 24, 2018 Spnews Comments Off on तपाइको आजको दिन कस्तो हुनेछ ? हेर्नुस राशिफल भदौ ८ गते, शुक्रबार
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) : कर्म भावमा गोचर गर्ने चन्द्रमाले सकारात्मक सोचको विकाश हुनेछ , भने नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी समय अनुसार अपडेछ होईनेछ । व्यापार व्यवसायमा नयाँ प्रयोग गरी मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ । कामको खाजिमा हुनेहरूले नयाँ […]
राशि अनुसार तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल भदौ १ गते, शुक्रबार
August 17, 2018 Spnews Comments Off on राशि अनुसार तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल भदौ १ गते, शुक्रबार
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) तार्किक क्षमताबाट वृद्धि भएर जानेछ भने वाणीमा थप निखारता आउने हुनाले नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ । एकल तथा साझेदारी व्यापार फस्टाएर जानेछ भने व्यापारकै सिलसिलामा रमाइलो यात्राको तय हुनेछ । माया प्रेममा […]
राशी अनुसार तपाईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ? हेर्नुस राशिफल साउन २५ गते, शुक्रबार
August 10, 2018 Spnews Comments Off on राशी अनुसार तपाईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ? हेर्नुस राशिफल साउन २५ गते, शुक्रबार
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) कृषि तथा पशुपालनमा गरिएको लगानीबाट मनग्गे आम्दानी हुनेछ । काम तथा अध्ययनको सवालमा आमा तथा आफन्तबाट छुट्टिएर यात्राको तय गर्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ । घर जग्गा तथा सवारी साधनको खरिद बिक्रीबाट भनेजस्तो नाफा कमाउन […]
तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल साउन १८ गते, शुक्रबार
August 3, 2018 Spnews Comments Off on तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल साउन १८ गते, शुक्रबार
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) विदेश यात्राको गतिलो सम्भावना रहेको छ भने विदेशी सामानको व्यापार फस्टाएर जानेछ । स्वदेशमा उत्पादित सामानको व्यापार व्यवसायमा अरुदिन भन्दा अलि बढी समय खर्चिनु पर्नेछ । मध्यान्हबाट समय राम्रो रहेकोले क्षमता प्रदर्शन गरेर नाम […]
तपाइको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल साउन ११ गते, शुक्रबार
July 27, 2018 Spnews Comments Off on तपाइको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल साउन ११ गते, शुक्रबार
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) कर्म भावमा गोचर गर्ने चन्द्रमाले सकारात्मक सोचको विकास हुनेछ भने नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी समय अनुसार अपडेछ होईनेछ । व्यापार व्यवसायमा नयाँ प्रयोग गरी मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ । कामको खाजिमा हुनेहरूले नयाँ काम […]
तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल असार २२ गते, शुक्रबार
July 6, 2018 Spnews Comments Off on तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल असार २२ गते, शुक्रबार
मेष(चू,चे,चो,ला,लिई,लू,ले,लो,अ) : व्यापारमा लगानी बढाउने बाध्यात्मक परिस्थिति आएपनि समय मध्ययम रहेकोले ध्यान दिनु जरुरी छ । विदेशबाट आयातित सामानको व्यापार फस्टाउनेछ भने स्वदेशमा उत्पादित सामानहरूले बजार पाउने सम्भावना कम रहेको छ । खोज तथा अनुसन्धानमा लाग्ने […]
तपाइको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल : असार १५ गते, शुक्रबार
June 29, 2018 Spnews Comments Off on तपाइको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल : असार १५ गते, शुक्रबार
मेष(चू,चे,चो,ला,लिई,लू,ले,लो,अ) : आजको समय राम्रो रहेकोले धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रमा विशेष चासो बढ्नेछ । पढाई लेखाई तथा खोजीमुलक क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ भने गुरुवर्ग तथा आफन्तको सहयोगले थप हौसला प्राप्त हुनेछ । बुवा वा बुवा सरहका मानिसबाट […]